बाजीको ओइरो « News of Nepal
आइतबार पहिलो चरणमा विभिन्न ३२ जिल्लामा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब निर्वाचरण परिणामको आंकलन शुरू भएको छ। कुन पार्टीले कति सिट जित्छ यस्तो बहस सामान्य भइसक्यो। ‘त्यो नेताचाहिँ यसपटक नराम्ररी पछारिने भयो’, ‘हैन गठबन्धन निकै दह्रो छ, कसरी हार्छ, निकै मतान्तरले जित्नुपर्ने हो’ यस्तै यस्तै बहसले बढ्दो चिसो मौसम पनि निकै तातिएको छ।
धरहरालाई पनि निर्वाचन सम्पन्न भएका ३२ जिल्लाको चुनावी परिणाम बुझ्ने उत्सुकता निकै बढ्या छ। अन्यत्रको भन्दा राष्ट्रिय राजनीतिका हस्तीहरू डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ लडेका गोरखा क्षेत्र नं–२ को निर्वाचनपछिको माहोल निकै गज्जब छ। चुनावअघि निर्वाचनमा पार्टीले निर्धक्क खर्च गर्छन्, त्यसमा कुनै शंका छैन।
चुनावपछि भने पार्टीका शुभेच्छुक र राजनीतिमा सामान्य चासो राख्नेहरूले खर्चको ओइरो बगाउन थालेका रहेछन्। भट्टराईका समर्थकहरू आफ्ना नेताले जित्ने दाबी गर्दै लाखौं लाखको बाजी राख्न थाल्या छन्। श्रेष्ठका समर्थक पनि के कम? कसैले १ लाख बाजी राख्ने प्रस्ताव गर्यो भने अर्कोले निर्धक्क समर्थन जनाउँदै बरु २ लाख राखौं भन्छ। भर्खरका अल्लारेदेखि वयस्क र उमेर ढल्किएकाहरू पनि बाजी राख्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। यस्तो देख्दा धरहरालाई लाग्या छ, बल्ल पो चुनाव शुरू भएछ।